Hamado Music, mumhanzi mutambi kubva mugore | IPhone nhau
Haasi munhu wese anoda kana kugona bhadhara yekushambadzira mimhanzi sevhisi uye nhasi kuchine vazhinji vashandisi vanosarudza kuteedzera yavo yavanofarira mimhanzi kune yavo kifaa kana kuichengeta mugore. Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezvechikumbiro chaitibvumidza kuridza mimhanzi chete kubva kune edu enguva dzose masevhisi ekuchengetedza mugore asi hazvina kutibvumira kuteedzera mimhanzi kwairi, kuti tigone kuiridza. Yaiva nezvayakanakira nezvayakaipira. Nhasi tiri kutaura nezvechimwe chirongwa cheHamado Music, chishandiso icho kunze kwekutibvumidza isu kuridza mimhanzi yedu yavanofarira yakachengetwa mugore, zvakare inotibvumidza kuteedzera mimhanzi kwairi kuti tiitambe tisina kushandisa iTunes.
Hamado Music inotipa mukana wekubereka mimhanzi yedu yatinofarira yakachengetwa OneDrive, Google Drive kana Dropbox, Pamusoro pekutibvumidza kuteedzera mimhanzi parunhare kuti tiiridze zvakananga kubva kunyorera, tisingashandise application yeMusic, mimhanzi yatinofanira kunge takanyora nemazvo kuti iratidzwe nemazvo mukushandisa, chimwe chinhu icho vashandisi vazhinji vasina aifarira nezve iyi app uye akasarudza kutsvaga wechitatu bato mimhanzi vatambi.
Hamado Music ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye0,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kurodhaunura mahara kwenguva pfupi Kana iri interface yeapp, haina kunyanya kushamisa asi pakupera kwezuva izvo zvazviri ndezvekuti zvinoshanda, izvo zvazviri, kubvira apo mimhanzi painenge ichirira hatisi kuzotarisa pachiratidziri chedu mudziyo. Hamado Music inotibvumidza kuridza mimhanzi nealbum, nerwiyo kana nemunyori, chimwe chinhu chingatibatsire zvakanyanya kana zvasvika pakutsvaga mimhanzi yatiri kutsvaga.
Ichi chishandiso chine avhareji mamakisi e5 kubva kune mashanu nyeredzi, saka iri sarudzo yakanaka kwazvo kana isu taitsvaga chishandiso cherudzi urwu kune yedu iPhone kana iPad. Zvinoda zvirinani iOS 5 kana yakakwira, iri muChirungu uye inongobata zvishoma zvishoma kupfuura 8 MB pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Hamado Music, mutambi wemimhanzi kubva mugore